FAAYILII - Namni haleellaa Onkoloolessa 18, 2021 raawwatameen madaahe gara mana yaakaa yeroo geeffamu
Paakistaan keessatii torban tokko gidduutti yeroo lammafaadhaaf kaleessa balaa dhoohinsa boombii qaqqabeen miseensonii Umna naga eegdotaa 5 du’anii, namoonii 30 immoo madaa’uu isaanii gabaasameera.
Balaan gareen Isilaamiik Isteets jedhamuu itti gaafatamummaa isaa fudhate kun kibbaa lixa biyyatti kutaa Baluchistaan keessatti yemuu ta’u, nammii ajjeesee du’uudhaaf of kenne tokko qondaaltotaa mootummaa ol aanoo karaa magaala Sibii irraa darbaa turan irratti akka xiyyeefate kan gaabasame.
Balaan sun kan qaqqabe erga prezidaantiin biyyatti Ariif Aliiv achiin darbanii Daqiiqaa muraasaa booddee ta’uu isaa kan himan Umnoonni nageenyaa biyyatti, tarkaanfichii prezidaantichaa irratti kan akeekamee ta’uu isaa addaan baasanii hin dubbanne.
Jimaataa dheengaddaa Masikiidaa Shi’aatotaa Magaalaa Peshawar keessaa jiruu irratti dhoohinsaa raawateen namoonni 63 du’anii 200 kan ta’n immoo madaa’uun isaanii gabaasamuun isaa ni yaadatama.
Umnoonii nageenyaa mootummaa Paakisataan qibxata kaleessa kutaa biyyatti Baluchistaan keessatti tarkaanfii fudhataniin loltoota garee Islaamiik Isateet torbaa ajjeesuu isaanii, kanneen keessaa lama hoggantootaa akka ta’an beeksisuun isaanii gabaasameera.